ကဲဘယ်လိုလဲ မောင်ကုလားတို့ Post Disabled by Mod-7 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Moderator » ကဲဘယ်လိုလဲ မောင်ကုလားတို့ Post Disabled by Mod-7
ကဲဘယ်လိုလဲ မောင်ကုလားတို့ Post Disabled by Mod-7
ဓါတ်ပုံ (RSV & INTERNET)
ကဲမောင်မောင်ကုလားတို့ရေ အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်သူလွန်တယ်ဆိုတာသိကြပလား။
ကိုယ့်အိမ်ကိုမီးရှို့ ၊ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဗလီတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် မီးရှို့ ၊ မီးညှိမ်းဖို့လာတဲ့ မီးသတ်တွေကို ဂျင်ဂလိနဲ့ပစ်ပြီးတော့ မီးညှိမ်းလို့မရအောင်နှောက်ယှက် ၊ ပီးတော့မှ ရခိုင်တွေအပေါ်အထင်မှားအောင် မဟုတ်မဟတ် လန်ကြုပ်သတင်းတွေလွှင့် ၊ ရခိုင်တွေက နှိပ်စက်လို့ ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးနေရပါတယ်ဆိုပီးတော့ အော်နေတဲ့ကောင်တွေ ။ အပေါ်ကပုံတွေထဲမှာ ဘင်္ဂလီ တစ်ယောက်မှမတွေ့မိဘူးနော်၊ကြားရတဲ့သတင်းတွေမှာလည်း ရခိုင်ရွာတွေကို ဘင်္ဂလီတွေက ဝင်တိုက်တဲ့သတင်းတွေပါ့လား။ ဟောဒီကာတွန်းပုံလေးလိုတော့ဖြစ်နေဘီဗျ။
“သိသိရက်နဲ့မိုက်ခဲ့တဲ့ နှလုံးသားအိမ်လည်း မလွန်ဆန်ရဲတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့”
သနားဂျဘာခညာ သနားဂျဘာ သူညားပေးစာကမ်းစာစားမှ ဝမ်းဝတဲ့ဘွပါ
ပြည်သူတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ။
ဒဏ်ရာရအောင် လုပ်တဲ့လူက ဒဏ်ရာပျောက်အောင် လုပ်ပေးဖို့လဲတာဝန်ရှိတယ်။
ဘဲဥရယ် …… ရှင့်ပို ့စ်ထဲက ပုံတွေ မြင်ရပြီး ရင်လေးသွားတယ် … ။
ဒီတစ်ခါ ဖြစ်ရပ်ကတော့ ၊ ပထမတစ်ခါ ဆူပူတုန်းက ပါတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ပဲ ၊ သီးခြားဖြစ်တာမို့ ကြိုတင်ကြံစည်ပြီး ကမောက်ကမဖြစ်အောင် လုပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတာ မထားတာတွေ မသိတော့ဘူး ၊ဘင်္ဂါလီ ကုလားတွေ မျိုးပြုတ်ပါစေလို့ပဲ ကြိတ်ဆုတောင်းနေမိတော့တယ် ။
ကျွန်မတို့ စက်ရုံထဲက သန့် ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အစ်ကိုနဲ့ ယောကျာ်းက အဲ့ဒီနေရာရောက်နေတယ် ။ ပထမတစ်ရက်ပဲ အသက်ရှင်သေးကြောင်း အဆက်သွယ်ရပြီး နောက်ရက်မှာ ဘာမှ မရတော့လို့ သူ့ခမျာ အရူးတပိုင်းကို ဖြစ်လို့ …. ။ ဒီလို ထိခိုက်တဲ့ပုံတွေများ ပြလိုက်ရလျှင် ရှော့ရသွားမလားတောင်မသိဘူး ။
နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တပ်မတော် ကြည်း၊ရေ၊လေ စစ်ကြောင်းတွေ ၊ ဒီအချိန်မှာမှ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို မကာကွယ်နိုင်လျှင် ဘယ်လောက်များ ရင်နာစရာကောင်းလိမ့်မလဲ ။ လိုအပ်တဲ့နေရာအလိုက် လုံခြုံရေးအင်အား … တိုးမြင့်သင့်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေ ။ :gee:
စိတ်ပျက်တယ် ဥရေ…………. ဥပျက်တယ်ဟ !!